Rev. Nan Kalyar Hlaing – Full Gospel Assembly
Rev. Nan Kalyar Hlaing
ဆရာမ ဒေါ်နန်းကလျာလှိုင် ကို ဆရာမကလျာလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ ဆရာမရဲ့မိဘတွေကတော့ ဦးလင်စူမိုး (ဦးအောင်ငြိမ်း) နှင့် ဒေါ်မွှေးမွှေးတို့ဖြစ်ကြတယ်။ မွေးချင်းညီအစ်မ (၄) ယောက်အနက် ဆရာမကဒုတိယသမီး ဖြစ်တယ်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ အ.ထ.က (၂) လသာ တွင် မူလတန်းမှ အထက်တန်းအထိ သင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Full Gospel Assembly အသင်းတော်မှ ပြုလုပ်သော Children Camp မှ, ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှု ရရှိခဲ့ကာ၊ ၁၉၉၃ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် Full Gospel Assembly သင်းအုပ်ဆရာကြီး Rev. Dam Suan Mung ထံ၌ ရေနှစ်ခြင်းမဂ်လာ ခံယူခဲ့တယ်။
ထိုနှစ်မှာပဲ ဝိညာဉ်တော်နှစ်ခြင် ရရှိခဲ့ပြီး၂၀၀၀ – ၂၀၀၁ ခုနှစ် Full Gospel Bible Training Center အပတ်စဉ် (၅) နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ISOM တွင် ဓမ္မပညာ Diploma ကို ရရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Full Gospel Assembly အသင်းတော်၏ ဧဝံ‌ဂေလိ နယ်မြေဖြစ်သော တောင်ဒဂုံ၊ ကျီစုတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်နေရာမှ ဘုရားသခင်၏ ရွေးကောက်ခေါ်သံကို ယော ၁၅:၁၆ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖွင့်ပြချက်ရရှိခဲ့ကာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာတော့ အမှုတော်၌ ဆပ်ကပ်ပါဝင်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် အချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ပြီး ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့တွင် လိုင်စင်ရဓမ္မ အမှုတော်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉) ရက် နေ့တွင် သိက္ခာတော်ရအမှုတော်ဆောင်အဖြစ်လည်းကောင်း ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ – ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တောင်ဒဂုံ ကျီစု၌ ဧဝံ‌ဂေလိတွဲဖက်တာဝန်ခံအဖြစ် လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၃ – ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် တောင်ဒဂုံ ၅၆ ၆၉ ၌ ဧဝံ‌ဂေလိတွဲဖက် တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သမ္မတကမ်းခြေ၌ ဧဝံ‌ဂေလိတွဲဖက်တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှစ၍ အလတ်ချောင်း၌ ဧဝံ‌ဂေလိတွဲဖက်တာဝန်ခံ နှင့် အလတ်ချောင်းအမျိုးသမီး အဖွဲ့တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ၊၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဗိုလ်တစ်ထောင်နယ်မြေ တာဝန်ခံအဖြစ်လည်းကောင်း ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ပါဝင်အမှုဆောင်လျှက်ရှိတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မေလ (၃) ရက်နေ့မှာတော့ ဆရာမဟာ သူချစ်ရတဲ့ ဦးကြည်ဝင်း + (ဒေါ်တင်လှ) တို့၏ သားထွေးဖြစ်သူ ဦးစောချစ်ထွေးနှင့် စုံဖက်လက်ထပ်ကာ သမီး (၁) ဦး နှင့် သား (၁) ဦး ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ သမီး မအန်းနိုရာချစ် ၊ သား မောင်အော်စကာချစ်တို့ဖြစ်ကြတယ်။
အမှတ် (၁၈၃) ၊ အလယ်ရွာ ၊
အလတ်ချောင်း ၊ တွံတေးမြို့နယ်၊
အဆိုးအားဖြင့် အရှုံးမခံနှင့် ၊ အကောင်းအားဖြင့် အဆိုးကို နိုင်လော့” (ရောမ ၁၂:၂၁) ။
သူခိုးသည် ခိုးခြင်း ၊ သတ်ခြင်း ၊ ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ လာတတ်၏။ ငါမူကား သိုးတို့သည် အသက်လွတ် ရုံမျှမက အထူးသဖြင့် အသက်နှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ လာသတည်း (ယော ၁၀:၁၀) ။